Amandla eSistem kwibhokisi yangaphandle yesithethi esitratweni | Iindaba zeGajethi
Namhlanje sikuzisa uphononongo olunomdla kakhulu ngeli xesha leholide. Ukuba ungomnye wabo bafuna umculo ebomini bakho kwaye uthanda ukuwusa naphina, ungaphoswa lolu hlaziyo. Sivavanye isithethi sangaphandle seBhokisi yeSitalato kwi-Energy Sistem, wonke umhlaba yenzelwe ngaphandle kunye nebhetri okwethutyana.
Amandla, ibhetri kunye nokuphatheka zintathu zeempawu eziphambili zesithethi esomeleleyo. Iimpawu zokuzikhusela ukuze ungabinayo iewat okanye uphelelwe yibhetri mzuzu ungafanelekanga. Amandla Sistem asinika isithethi esikwaziyo ukuqhubeka nathi naphina apho sifuna ukuya khona.
1 Isitalato iBhokisi yangaphandle, amandla kunye nokuzimela okwethutyana
2 Uhlobo lwangaphandle kuwo omane amacala
3 Ibhetri kuye wonke umntu onesithethi se-Outoor Box Street
4 Amandla kunye nomgangatho wesandi
5 Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Energy Sistem Outoor Box Street
Isitalato iBhokisi yangaphandle, amandla kunye nokuzimela okwethutyana
Sikwiintsuku zokuphuma, ukuhamba, ukosa inyama, ulwandle, iintaba, ngamafutshane, ngeeholide. Kwaye lixesha elifanelekileyo ukonwabela umculo wethu owuthandayo ngaphandle. Ukuhamba neentlanganiso zethu nabahlobo bomculo kulula kunakuqala. Kwaye ngoku nesithethi seBhokisi yangaphandle yesitalato, sinokuyenza ngeyona ndlela ibalaseleyo kunokwenzeka.
Ukuba ujonga isithethi esifanelekileyo ukuba sihambe nomculo wakho kwenye indawo, namhlanje sikulethela inketho ekufuneka uyiqwalasele. A isixhobo esomeleleyo Ungazikhathazi ngayo malunga nokudyobha, ukukrwela okanye nokuba manzi. Amandla eSistem kunye nesi sithethi sithetha ukuba kufuneka sikhathazeke ngokukhetha ingoma evakala ilungile. Thenga kwiAmazon kwi Amandla eSistem yangaphandle Ibhokisi yesitalato ngokuthumela simahla.
Uhlobo lwangaphandle kuwo omane amacala
Isandisi-lizwi se-Energy Sistem Outoor Box Street siphila ngokuvisisana negama laso. Ifunyenwe kwaye yakhiwe ukumelana nezinto Inembonakalo eyomeleleyo. Babo imigca ethe tye, iziphelo ezi-angled kunye ukufaka umzimba wakho wonke ngezinto zerabha esithambileyo kuchaza isixhobo esirhabaxa.
Kwaye unyamezelo aluphelelanga ekubukekeni. Njengoko kubonakala ekuboneni kokuqala, iSitalato seBhokisi yezaMandla iOutoor yenzelwe ukuba esitratweni. Ukuxhathisa umothuko kunye nokumelana zimbini ezona mpawu zibalulekileyo xa kufikwa ekubeni sikwazi ukuzithatha naphina apho sifuna ukuya khona nomculo wethu.
Ukuba ujonga kwinxalenye yayo ephezulu, into yokuqala etsala iliso kukubamba kwayo. Into esikhumbuza ngezi nkqubo zesandi ezivakala kakhulu kwii-80s. Isibambo sesinyithi esifakwe ngaphakathi ebonelela ngohlobo oluthile lokujonga kwakhona, kwaye kwangaxeshanye iluncedo kakhulu.
Kwisixhobo uqobo esisifumana amaqhosha amahlanu omzimba esivumela ukuba sisebenzise ngesandla isithethi. Iqhosha layita icima, iqhosha ukuya khetha imowudi into esifuna ukuyisebenzisela yona. Inkqubo ye- iqhosha lokudlala / lokuphumla. Amaqhosha e ulawulo lwevolumu. Y iqhosha lokugqibela elisetyenzisiweyo ukwenza isibane se-LED ngalo kwelinye icala lalo.
Kumacala ayo, ngakumbi ngasekunene, njengoko sixoxile, kukho isibane se-LED esinamandla kunye nezibane ezingama-400 zamandla. Into eyongezelelweyo enomdla ukuba siyisebenzisa enkampini okanye elunxwemeni xa kuqala ukuba mnyama. Esi sithethi siguquguqukayo njengezona zininzi, kwaye njengoko sibona ukuba ilungele nayiphi na imeko.
Kulo icale lasekhohlo Sifumene isiciko esifihla indibaniselwano eyahlukeneyo. Si amazibuko amabini e-USB Basebenza bobabini ukuqhagamshela isixhobo, kunye nokusebenzisa isitalato iOutoor Box njengeBhanki yamandla ukuhlawulisa i-smartphone yethu. Uya kuyifumana ifayile ye- izibuko lokufaka ngoku. un Iplagi yejack ye3.5mm. Kwaye a indawo yokufaka imemori khadi Imicro SD.
Ibhetri kuye wonke umntu onesithethi se-Outoor Box Street
Ukongeza kwisandi esinokuba nesithethi, okanye ukuba siyayithanda uyilo lwayo, enye yezinto esiyihoye kakhulu yibhetri yayo. Ukuba ungahamba nathi naphi na ngaphandle kweeyure ngaphandle kwesidingo sokudityaniswa kombane kubaluleke kakhulu. Kwaye iSistim saMandla eSistem se-Outoor Box Street singaphezulu kokuhlangabezana nale mfuno.
Thenga iSistim saMandla eSistem sangaphandle seBhokisi esitratweni eAmazon ngaphandle kweendleko zokuhambisa
Iza ifakwe i ibhetri ye-lithium-ion ene-4.400 mAh umthamo. Umthwalo onokubonakala ngathi umncinci xa uthelekisa kunye nee-smartphones esele zinazo. Nangona sisazi ukuba ayithelekiswa nokusetyenziswa kwefowuni enesikrini sayo kuphela. I-4.400 mAh Bayasiqinisekisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-14 zokudlala umculo oqhubekayo. Ngaba amaqela akho ahlala ixesha elide?
El ukulayisha ixesha ukuba ibhetri ilungele ukuya kwi-100% ithatha ixesha elide kuba ifuna ukuya kuthi ga Iiyure ze5. Nangona kufuneka siyazi loo nto Sinokusebenzisa isithethi esidityaniswe kwitshaja akhongxaki. Ngapha koko, kule meko, sifumana ukutshaja intambo ngeemitha eziyi-1,5, eyenza kube lula ukubeka isithethi.
Enkosi ngebhetri enesisa Singasebenzisa i-Outoor Box Street yethu njengethotshi ngenxa yombane wayo onamandla we-LED. Okanye ubize nasiphi na isixhobo usebenzisa izibuko le-USB elenziwe ngale njongo.
Amandla kunye nomgangatho wesandi
Inkalo yamandla ikwangomnye wamandla esi sithethi. Amandla eSistem abonelele nge-Outoor Box Street nge amandla e50w. Oku kuyenza ibe phakathi kwezona zithethi zinamandla ziphathekayo kwimarike. Kwaye ihlala ikwizikhundla eziphezulu ngaphandle kwamathandabuzo ukuba siyaya kwi Ubudlelwane obugqwesileyo phakathi komgangatho nexabiso esi sixhobo.
Ngaphandle kokufumana oko umculo uvakala kamnandi, kwakhona ivakala kakhulu. Isandi sebhasi sinamandla kwaye ukungcangcazela kwayo kubonwa ngenkcazo ngaphandle kokugqwetha nangaliphi na ixesha. Uyakwazi ukwenza umculo wakho ukuba ube sisandi kwikona yokugqibela ngenxa yamandla ayibonayo Amava okumamela okuhle.
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Energy Sistem Outoor Box Street
Umzekelo Isitalato iOutoor Box
Inkqubo yesandi Isitiriyo 2.0
Conectividad I-USB-Micro SD-3.5 jack
Ibhetri 4.400 mah
Ukuzimela Ukuya kwiiyure ezi-14
Ixesha lokutshaja Iiyure ze5
Ubukhulu X x 345 170 103 mm
U bunzima 2.1 kg
Ixabiso 119.00 €
Ikhonkco lokuthenga Amandla eSistem yangaphandle Ibhokisi yesitalato
Ukuzimela kweeyure ezingama-14
Umothuko kunye nokumelana
Ubungakanani obukhulu obukhulu bokuthatha kuhambo
ISITRATO SEBHOKISI ZANGAPHANDLE
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Amandla eSistem Ibhokisi yangaphandle yesitrato uhlalutyo
I-LG 32QK500-W esweni i-QHD ngexabiso elinomdla, sayivavanya